2020 ခုနှစ် (9) လပိုင်းအတွက် ခုနှစ်ရက် သားသမီးဟောစာတမ်း
HomeKnowledge2020 ခုနှစ် (9) လပိုင်းအတွက် ခုနှစ်ရက် သားသမီးဟောစာတမ်း
H September 02, 2020
1. 9. 2020 မှ 30. 9. 2020 ထိ တစ်လစာဟောစာတမ်း
ဟောစတမ်းအပြင် ယတြာလေးတွေပါလို့ သိမ်းထားဖို့ မမေ့နဲ့နော်
တနင်္ဂနွေနေ့ သားသမီးများသည် အလုပ်အကိုင် အောင်မြင်မှုနှင့် ကြုံတွေ့မည်။ ဆရာကောင်းမိတ်ဆွေများနှင့် ဆုံမည်။ မမျှော်လင့်ထားသော အကူညီများ ရရှိမည်။ ဤလတွင် အလုပ်နှစ်ခု တစ်ပြိုင်နက်တည်း မလုပ်သင့်ပါ၊ တစ်ပိုင်းတစ်စ ဖြစ်တတ်သည်။ အပြိုင်အဆိုင် မနာလိုသူ ပေါများမည်။
ခရီးရှည် ရက်ရှည်ခရီး မထွက်သင့်ပါ။ သူများဦးစီးသော ခရီးဝေး မထွက်သင့်ပါ။ အစားအသောက်မှား၍ အစာအဆိပ်သင့် တတ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဝမ်းဗိုက်နှင့် ပတ်သက်၍ အထူးဂရုစိုက်ပါ။ ချစ်သူနှင့် အိမ်ထောင်မရှိသူများ ချစ်သူရည်းစား အသစ်ရမည်၊ အိမ်ထောင်သည်များ သားသမီး ရတနာထွန်းကားမည့်လ ဖြစ်မည်။ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေမည့်လဖြစ်သည်။
ယတြာ - အိုးတစ်လုံးတွင် သဲအပြည့်ထည့်ပီး ရေအနည်းငယ် လောင်းပါ၊ ပီးလျှင် ရွှေထီး၊ ငွေထီးစိုက်၍ ဘုရားတွင်လှူပါ။ မိမိလိုရာ ဆုကိုတောင်းပါ။
1 .9. 2020 မှ 30. 9. 2020 ထိ တစ်လစာ ဟောစာတမ်း
ဤလအတွင်း ဘယ်သွားသွား၊ ဘယ်လာလာ မိမိထက်ကြီးသူ၊ ငယ်သူနှစ်ဦး ဒုက္ခပေးမှုကို ခံရမည်။ မိမိရဲ့အတွင်းကိစ္စများ သူတစ်ပါးကို မတိုင်ပင်ကောင်းပါ။ ငွေရေးကြေးရေး အချေးအဌား အကျိုးမပေးပါ။ သူတစ်ပါးအတွက် အာမခံပေးတာ တာဝန်ယူပေးတာ အကျိုးမပေးပါ။ သူများကိစ္စ မိမိကိစ် စဖြစ်တတ်သည်။
ရပ်ဝေးမှ သတင်းကောင်းကြားရမည်၊ ခရီးထွက်ရမည်။ ပညာရေးတွင် အင်တာဗျူးအောင်မြင်ခြင်း၊ ရာထူးရာခံတိုးခြင်း၊ အတန်းစားမေးပွဲများ အမှတ်ကောင်းများဖြင့် အောင်မည်။ အကြီးအကဲ အားပေးချီးမြှောက်ခြင်း ခံရမည်။ အသက်၂၄၊ ၃၂ နှစ်အရွယ် ရှိသူများ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ။ အတိုက်အခိုက်များမည်။ အိမ်ထောင်ရေး၊ အချစ်ရေးကံ မကောင်းပါ။ အသက် ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁နှစ် အရွယ်များ အချစ်ရေး စန်းပွင့်မည်။ အပေါင်းအသင်း ဂရုစိုက်ပါ။
ယတြာ - အိမ်ဘုရားတွင် သင်္ဘောသီးတစ်လုံး၊ ချိုချဉ် (11) လုံးနှင့် ပန်းအဝါရောင် (15) ပွင့်ကို ကပ်လှူပေးပါ။
ဤလတွင် စကားပြောရာ၌ ပါးနပ်စွာ သုံးချရမည်၊ အပြောအဆိုဆင်ခြင်၍ စကားနုတ်ကျွံတာမျိုး မဖြစ်ပါစေနှင့် ၊ ငြင်းပွားစရာ လူမှုရေးပြဿနာများ ဖြေရှင်းရတတ်သည်။ မိတ်ဆွေသည် ရန်သူဖြစ်စေသည်၊ ဥပေက္ခာပြုနိုင်လေ မိမိအတွက် အကျိုးပေးလေဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစီးပွားအောင်မြင်သော ကာလဖြစ်သည် အလုပ်အကိုင် အသစ်လုပ်ရခြင်း၊ တိုးချဲ့ရခြင်း၊ နေရာပြောင်းရွှေ့ရခြင်း ကြုံရမည်။ တန်ဖိုးရှိစက်ပစ္စည်းများ အပျက်အပျောက်များမည်။
ကျန်းမာရေးအတွက် ဝမ်းဗိုက် အထူးဂရုစိုက်ပါ၊ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသမီးရောဂါ အထူး ဂရုစိုက်ရမည်။ ပညာရေးတွင် လူမှုရေး၊ အချစ်ရေးကိစ္စများ ဖြစ်ပေါ်ပါက ပညာမှာ တစ်ပိုင်းတစ်စဖြစ်ပီး နှောင်နှေးလိမ့်မည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်ဖို့ အရေးကြီးသည်။ အိမ်ထောင်ရှိသူများ သားသမီးအတွက် ကျန်းမာရေး စိတ်ပူပင်သောက ရောက်တတ်သည်။ ဤရက်ပိုင်းတွင် တနင်္ဂနွေ နှင့် စနေသားသမီးများထံမှ မျှော်လင့်မထားသော အကူညီများရမည်။
ယတြာ - အိမ်ဘုရားတွင် ကံ့ကော်၉ညွန့် လှူပေးပါ။
အလုပ်အကိုင်အသစ် လုပ်ကိုင်ရမည်၊ မကိုင်ဖူးသောငွေ ကိုင်ရမည်။ မလှူဖူးသော အလှူမျိုး လှူရမည်။ ထီထိုးပေးပါ။ အိမ်ထောင်ရေးသာယာမည်၊ သားသမီးဝင်ကိန်း ရှိသည်။ ရွှေ၊ငွေ ရတနာများလည်း ဝင်မည်။ ပတ်ဝန်းကျင်၏ သပုတ်လေလွင့် ပြောဆိုခြင်းခံရမည်၊ ကိစ္စတစ်ခုကို လွယ်လွယ်နှင့် မဆုံးဖြတ်ပါနှင့် စိတ်အေးအေးထားပီး ဖြေရှင်းပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နာရေးသတင်းကြားပါက အကူငွေ တစ်ထောင့်ခုနှစ်ရာ၊ တစ်သောင်းခုနှစ်ထောင် စသည့် ၁၇ ဂဏန်းကို လှူရမည်။ ကျန်းမာရေးတွင် သွေး၊ လေရောဂါနှင့် အာရုံကြောကို အထူးဂရုစိုက်ပါ။ အသက် ၂၆၊ ၂ရ အရွယ်ရှိသူများ ဆိုင်ကယ်စီး၊ ကားစီး အထူးဂရုစိုက် သင့်ပါသည်။ ကံဇာတာအမြင့်အချိန် ရောက်ရှိနေသောကြောင့် အပြိုင်အဆိုင် ပေါများမည်၊ မနာလိုသူ ပေါများမည်။
ယတြာ - မိမိ၏မွေးနံဂြိုဟ် ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်နံဒေါင့် ဘုရားမှာ ရွက်လှညွန့် (17) ညွန့်၊ ဖယောင်းတိုင် (17) တိုင်၊ အမွှေးတိုင် (17) တိုင် ထွန်းညှိပူဇော်ပေးပါ၊၊
1. 9. 2020 မှ 30 .9. 2020 ထိ တစ်လစာဟောစာတမ်း
ဤရက်ပိုင်းအတွင်းတွင် နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်မည်၊ ဆုထူးဂုဏ်ထူး ရမည်၊ မမျော်လင့်ပဲ အလှူအတန်းတစ်ခု လှူရတတ်သည်။ ပညာကံ အထူးကောင်းသည်။ ရပ်ဝေးနိုင်ငံခြားမှ အလုပ်အကိုင်များ အဆက်သွယ်ရမည်။ မြုပ်နေသော ငွေကြေးများပေါ်မည်၊ ရစရာရှိသော ငွေများရမည်။ အလုပ်အကိုင် အပြောင်းအလဲ ကြုံတွေ့ရမည်။ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်း လုပ်ငန်းအသစ် စတင်ခြင်းကောင်းမည်။ စပ်တူရှယ်ယာတူ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
အိမ်ထောင်အိမ်ဖက် အပြောင်းအလဲ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ အထူးသဖြင့် အသက် ၃၅ ၊၃၇ ၊၃၈ နှစ်အရွယ် ကျရာက်သူများ အထူးဂရုစိုက် သင့်ပါသည်။ မြေ၊ မီး၊ မိန်းမ၊မင်းစိုးရာဇ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး စသော ပြဿနာများ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ဘာသာခြား၊ လူမျိုးခြား အတိုက်အခိုက် ရှိသည်။ ကျန်းမာရေးမှာ သွေးအားနည်းရောဂါ ဖြစ်တတ်သည်။ ချစ်သူရှိပြီးသောသူများ စိတ်ချမ်းသာ၍ ချစ်သူ မရှိသောသူများ အောင်သွယ်တော်ကို အားကိုးရမည့်ကာလ ဖြစ်သည်။
ယတြာ - တန်ခိုးကြီးဘုရားတွင် ပန်းအနီရောင် (19) ပွင့်၊ အောင်သပြေ (19) ညွန့်၊ ဖယောင်းတိုင်း (19) တိုင်၊ အမွှေးတိုင် (19) တိုင် ထွန်းညှိပူဇော်ပေးပါ၊၊
1 .9. 2020 မှ 30. 9. 2020 ထိ တစ်လစာဟောစာတမ်း
ဤရက်ပိုင်းတွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပခရီးထွက်ကိန်း ရှိသည်၊ အောင်မြင်မှုရမည်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းများ ဝင်မည်။ တန်ဖိုးရှိသော လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ရတတ်သည်။ ငွေမမြဲပါ ငွေအထွက်များမည်။ လူလိမ်ငွေလိမ်ခံရ၍ ငွေလျော်ကိန်းရှိသည်။ ငွေကြေးအရှုပ်အရှင်း သတိပြုပါ။မိသားစုနှင့် စိတ်သဘောထား မတိုက်ဆိုင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်မည်။ အထူးသဖြင့် အသက် ၂၉ နှစ်မှ ၃၅ နှစ်အတွင်း ရှိသောသူများသည် ရုံးပြင်
ကဏ္ဍ အမှုအခင်းများ ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။
ယတြာ - စက္ကူကန်တော့တွင် ထန်းလျက် ၈လုံး ထည့်၍ ခွေးတစ်ကောင်အားကျွေးပါ ၊ ကျွန်ုပ်၏အညံ့များ ပြေပျောက်ပါစေ ဟုဆိုကာ ကျွေးပါ။ ငါးများကို အစာကျွေးပါ။
စနေသားသမီးများသည် ဘဝ၏ အောင်မြင်ဆုံးအချိန်ကို ရောက်ခါနီးမှ ရှေ့တိုးရခက်၊ နောက်ဆုတ်ရခက် ဖြစ်တတ်သည်။ ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင်ဖြင့် အချိန်များ ကုန်စေမည်။ ကြီးမားသော ဒုက္ခမဟုတ်သော်များလည်း စိတ်နှောက်ယှက်မှုများ ကြုံရမည်။အလုပ်တစ်ခုကို ပြီးစီးအောင်လုပ်မှ အကျိုးရှိမည်။ တစ်ပိုင်းတစ်စ မထားပါနှင့်။ နာမည်ဆိုးထွက်တတ်သည်။ လက်အောက်ငယ်သားများသတိထားပါ။
မမျှော်လင့်ပဲ အကြီးအကျယ် ငွေဝင်ကိန်းရှိသည်။ စက်ပစ္စည်းကြီးကြီး ဝင်တတ်သည်။ မလုပ်ဖူးသော အလှူတန်းကြီးကြီးမားမား မမျှော်လင့်ပဲ လုပ်ရတတ်သည်။ မတူညီသော အလုပ်တစ်ခုတွင် အောင်မြင်ထင်ရှားမည်။ အသက်၂၉ နှစ်ပြည့် ၃ဝ အဝင် ၆ လတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ရမည်။ ဆေးသောက် ဆေးမှား ဂရုစိုက်ပါ။ စက်ပစ္စည်း အဝင်ကောင်းသည်။ မိသားစု ပြဿနာ အိမ်တွင်းရေးပြဿနာ ရင်ဆိုင်ရမည်။
ယတြာ - အသက်ကြီးသူတစ်ဦးကို ဒိန်ချဉ် သို့မဟုတ် နွားနို့လှူပါ။